မင်္ဂလာရွှေ EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာမင်္ဂလာရွှေ EA ၏မင်္ဂလာရွှေ EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အကောင်းဆုံး Forex EA'S | ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး | FX စက်ရုပ် မင်္ဂလာရွှေ EA ၏ 1
ရရှိနိုင်ပါသည်မင်္ဂလာရွှေကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး၏2ကွဲပြားခြားနားသော packages များအခုအချိန်မှာရှိပါတယ်:
မင်္ဂလာရွှေ EA ၏ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - XAUUSD Trading အတွက်အမြတ်အစွန်း Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး
မင်္ဂလာရွှေ EA ၏ တစ်ဦးတီထွင်ဆန်းသစ်ဖြစ်ပါသည် FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး ထိုအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး မင်္ဂလာ Forex ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များအသင်း။
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာမင်္ဂလာရွှေ Forex စက်ရုပ်အသုံးပြုမှု လမ်းကြောင်းသစ် ဗျူဟာ ယင်းအပေါ်အလုပ်လုပ်တယ်ကြောင်းပြုပြင်ထားသောအကှေ့အကောကျညွှန်ပြချက်နှင့်အတူ XAUUSD 30 မိနစ်အချိန်ဘောင်နှင့်အတူဇယား။ အကှေ့အကောကျညွှန်ပြချက်အပုဒ်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်ဇယား၏အစွန်းရောက်အချက်များဆက်သွယ်။ တန်းတူဒါမှမဟုတ်စျေးနှုန်းစကေးများအတွက်သတ်မှတ်ထားသောရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုမိုမြင့်မားနေခြင်းကဤအချက်များအကြားအကွာအဝေး။ အဆိုပါ developer များကအကောင်းဆုံးတည်ငြိမ်မှုနှင့်အမြတ်အစွန်းအဘို့အ Metatrader 99.90 (MT4) တွင် 4% optimization အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ Forex EA ၏ စျေးကွက်စိတ်ဓါတ်များအပေါ်အခြေခံပြီးခက်ခဲရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှု (-24 pips) နှင့်ပြောင်းလဲနေသောယူအမြတ်အစွန်းအဆင့်ဆင့်ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သည်အလွန်နိမ့် slippage (Market ကထုတ်လုပ်သူ) နှင့် API Connections ကို (အခြေအနေမ) အများဆုံး 40 pips ပြန့်ပွားဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ သငျသညျမိနစ်အတွင်းအလွယ်တကူ setup ကိုကလို့ရတယ်။
မင်္ဂလာရွှေရဲ့ အကြီးမြတ်ဆုံးအားသာချက်: သည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ဒီအဖွင့်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စျေးကွက်မှ Adjust Forex စက်ရုပ် 2010 ကတည်းကနေဆဲအမြတ်အစွန်းသည်။ သငျသညျအပြည့်အဝထောက်ခံမှုရရှိရန်နှင့်အဖွဲ့သည်အစဉ်အမြဲသင့်ကိုကူညီပေးဖို့အဆင်သင့်ပါ!
မင်္ဂလာရွှေ EA ၏ သင်အောင်မြင်မြင်ချင်သူကိုကုန်သည်တွေအနေနဲ့ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ကတီထွင်ခဲ့သည်!
၏အသုံးပြုမှုကို Make မင်္ဂလာရွှေ EA ၏ နှင့်ရွှေသို့သင်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဖွင့်!
မည်သည့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲလွယ်ကူသောပိုက်ဆံဘာသည် မင်္ဂလာရွှေ EA ၏ အားလုံးအကြောင်းပါ။ ဘောင်, အကြေးခွံနှင့်သင့်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာကန့်သတ်သငျသညျပေးခဲ့ကြပြီးနောက်, စက်ရုပ်ကျော်ကြာနှင့်သင်တို့အဘို့အရောင်းအပေါငျးတို့သကိုင်တွယ်။ ဤသည်အဖြစ်ကောင်းစွာအခြားအရေးကြီးကိစ္စရပ်များပေါ်တွင်သင်၏စွမ်းအင်အာရုံစိုက်နေချိန်တွင်ထိန်းချုပ်မှုယူရန်သင့်အားခွင့်ပြုထားသည်။
အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးအပေါ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ် 24 /5ညဥ့်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းအမြတ်အစွန်းလဲလှယ်ခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေ။ သင်ကကို turn off မဟုတ်လျှင်ဒီတော့သင်ကတစ်ခုတည်းအကျိုးအမြတ်ကုန်သွယ်မှု option ကိုလက်လွတ်မည်မဟုတ်။
မင်္ဂလာရွှေ EA ၏ - ထရေးဒင်း Logic, Setup ကိုထိုအခြားလိုအပ်ချက်များအကြောင်း
မင်္ဂလာရွှေ EA ၏ အချို့သောနာရီအတွင်းအရောင်းအ, လာမယ့်စုံတွဲနာရီသို့မဟုတ်နေ့ရက်ကာလအဘို့စျေးနှုန်းညှနျကွားခပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီးဆုံးဖြတ်သည်။ ဒါ့အပြင်ဒီကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးသင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အန္တရာယ်များနှင့်နှစ်လိုဖွယ်အမြတ်အစွန်းနှင့်အတူကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။ အဆိုပါကုန်သွယ်မှုစနစ်ကြီးမြတ်အမြတ်အစွန်းရရှိမညျနှင့်နေ့တိုင်းအရောင်းအဖွင့်လှစ်။
အဆိုပါ FX စက်ရုပ် အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ကြောင်းပြုပြင်ထားသောအကှေ့အကောကျညွှန်ပြချက်တွေနဲ့ဦးရေပြား / လွှဲနည်းဗျူဟာကိုအသုံးပြုသည် XAUUSD M30 / H1 / H4 ဇယား၌တည်၏။ အကှေ့အကောကျညွှန်ပြချက်အပုဒ်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်ဇယား၏အစွန်းရောက်အချက်များ, တန်းတူဒါမှမဟုတ်စျေးနှုန်းစကေးများအတွက်သတ်မှတ်ထားသောရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုမိုမြင့်မားနေခြင်းကဤအချက်များအကြားအကွာအဝေးကိုဆက်သွယ်။ အဆိုပါဖန်တီးသူကိုအကောင်းဆုံးတည်ငြိမ်မှုနှင့်အမြတ်အစွန်းအဘို့အ Metatrader အတွက် 99.90% optimization ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ မက်စ်ပွင့်လင်းလွတ်လပ်စွာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ စျေးကွက်စိတ်ဓါတ်များအပေါ်အခြေခံပြီးခက်ခဲရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှု (-24 pips) နှင့်ပြောင်းလဲနေသောယူအမြတ်အစွန်းအဆင့်ဆင့်ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ ကျနော်တို့အများဆုံး 20 pips ပြန့်ပွား, အလွန်နိမ့် slippage (ECN / Market ကထုတ်လုပ်သူ) အကြံပြုပါသည်။
terminal ကိုအတွက်အနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေလိုအပ်ချက် $ 1000 ဖြစ်သင့်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် $ 1000 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မဟုတျပါလျှင်, သင်အဖြစ်အနည်းငယ်သာအဖြစ် $ 10 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူရာခိုင်နှုန်းအကောင့်ဖွင့်လို့ရပါတယ်ဆိုလိုသည်။
နယူး update ကို EA ၏မင်္ဂလာရွှေ v1.1
ဗြာဒိတျ setting များကို: နယူး update ကိုမင်္ဂလာရွှေ v1.1 အသစ်သောအပြင်အဆင်များကဆက်ပြောသည် TP, SL နှင့် Trail ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ပထမဦးဆုံး TS တုံ့ပြန်ကြလိမ့်မည်မဟုတ်ခြင်းထက်အမှု၌အခြား Trail Stop2 ကဆက်ပြောသည်။ FixLot: ပထမဦးဆုံးဖွင့်လှစ်တွေအများကြီး၏အရွယ်အစား။ သငျသညျ0EA ၏မှာအန္တရာယ်ထားသောအခါ FixLot ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။
နယူး update ကို EA ၏မင်္ဂလာရွှေ v1.2
အသစ်သောအပြင်အဆင်များကဆက်ပြောသည်: BreakEven, ထရေးဒင်းနေ့ / နာရီ, အီးမေးလ်ပို့ပါ, ဦးရေပြားကိုပြင်ဆင်ခြင်း
နယူး update ကို EA ၏မင်္ဂလာရွှေ v1.3
BreakEven အော်တို4/5ဂဏန်းကို fix
အမှား modifyning ရောင်း fix သို့မဟုတ်ကုန်သွယ်ရေးကိုဝယ်
နယူး update ကို EA ၏မင်္ဂလာရွှေ v1.4
အသစ်က setting ကိုကဆက်ပြောသည်: BEpoint နှင့် A. အထရေးဒင်းနေ့ / B က။ ထရေးဒင်းနာရီ
နယူး update ကို EA ၏မင်္ဂလာရွှေ v1.5
အသစ်က setting ကိုကဆက်ပြောသည်: အဝေးသင် - ဆိုင်းငံ့ကုန်သွယ်ရေးထားရှိဘယ်မှာညွှန်ကိန်းမှအကွာအဝေး။
နယူး update ကို EA ၏မင်္ဂလာရွှေ v1.6
ဆိုင်းငံ့ရပ်တန့်ရောင်းဖွင့်လှစ်ပြီးနောက်ပြုပြင်မွမ်းမံ SL / TP / အမိန့်ကိုဝယ်
နယူး update ကို EA ၏မင်္ဂလာရွှေ v1.7
ဆိုင်းငံ့ရပ်တန့်ရောင်းဖွင့်လှစ်အပြီးပြင်ဆင်ချက်ပြုပြင်မွမ်းမံ SL / TP / 35ms အဘို့အလို့ငှာဝယ်ဖို့
နယူး update ကို EA ၏မင်္ဂလာရွှေ v1.7.1
ပြုပြင်ထားသော setting ကို Swing + ဘောနပ်စ MT5 ဗားရှင်း
နယူး update ကို EA ၏မင်္ဂလာရွှေ MT4 v1.8 နှင့် EA ၏မင်္ဂလာရွှေ MT5 v2.0
4 နှင့် MT11705တည်ဆောက်တည်ဆောက် MT2007 များအတွက် source code ကိုပြုပြင်မွမ်းမံ
AutoGMT - သင်၏ပွဲစားအဆိုအရအလိုအလျောက် GMT ချိန်ညှိခြင်း
မင်္ဂလာရွှေ EA ၏ - XAUUSD ကုန်သွယ်ရေးအတွက်သင်လိုအပ်သည့်တစ်ခုတည်းသောကုန်သွယ်ရေးကိရိယာ
ထိုအတူပျက်ကွက်အလွန်စိတ်ပျက်ဖွယ်အခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိပါတယ် မင်္ဂလာရွှေ EA ၏ ဒီဆော့ဖ်ဝဲကိုအာမခံချက်တစ်ဦး၏ဖန်တီးသူဖြစ်သောကြောင့် 89% အောင်မြင်မှုနှုန်းထက်ကိုပိုပြီး နှင့်လည်းအတည်ပြုထားသောရလာဒ်များပေးလိမ့်မည်။
မင်္ဂလာရွှေ EA ၏ မယုံနိုင်စရာစျေးနှုန်း, ဆိုလိုသည်မှာသာ€ 209.30 မှာချက်ချင်းမရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မိတ္တူဖမ်းပြီးမှမစောင့်ကြဘူး!
အဆိုပါတရားဝင်မင်္ဂလာရွှေ EA ၏ website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
HAPPY ရွှေ EA ၏ - XAUUSD TRADING ခရစ္စမတ်အထူးကမ်းလှမ်းချက် 2017 အကျိုးအမြတ်ရ FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး - 30% OFF ချစ်ခင်ရပါသောသူချင်း Forex ကုန်သည်, သတင်း! မင်္ဂလာရွှေ EA ၏ယခုလျှော့စျေးနှုန်းမှာမရရှိနိုင်ပါ! ဒီနေရာမှာပိုပြီးသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆုကြေးငွေရယူပါ: https://www.bestforexeas.com/happy-gold-ea-review/ မင်္ဂလာရွှေ EA ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များ၏မင်္ဂလာ Forex အဖွဲ့သည်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအနေနဲ့ဆန်းသစ် FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးသည်။ ပထမဦးစွာအားလုံးမင်္ဂလာရွှေ Forex စက်ရုပ် 30 မိနစ်အချိန်ဘောင်နှင့်အတူ XAUUSD ဇယားအပေါ်အလုပ်လုပ်တယ်ကြောင်းပြုပြင်ထားသောအကှေ့အကောကျညွှန်ပြချက်တွေနဲ့လမ်းကြောင်းသစ်နည်းဗျူဟာကိုအသုံးပြု၏။ အကှေ့အကောကျညွှန်ပြချက်အပုဒ်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်ဇယား၏အစွန်းရောက်အချက်များဆက်သွယ်။ ဤအချက်များအကြားအကွာအဝေးညီမျှဖြစ်ခြင်း... ဆက္ဖတ္ရန္